Hiob 11 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Sofar asɛm a edi kan (1-20)
Ɔkae sɛ Hiob ka kasa hunu (2, 3)
Ɔka kyerɛɛ Hiob sɛ onnyae bɔne (14)
11 Ɛnna Sofar+ a ofi Naama no kae sɛ: 2 “Enti nsɛm yi nyinaa, obiara nka ho hwee?Anaa kasa dodow na ɛma obi di bem?* 3 Wugye di sɛ wo kasa hunu yi bɛma nnipa aka wɔn ano atom anaa? Nsɛm a woreka twiw yɛn no, ɛyɛ wo sɛ obiara renka w’anim wɔ ho anaa?+ 4 Ka asɛm ma yentie a, wuse, ‘Me nkyerɛkyerɛ yɛ kronn,+Na me ho tew wɔ w’anim.’+ 5 Wo de, twɛn ma Onyankopɔn nkasa,Na ommue n’ano nkyerɛ wo!+ 6 Anka ɔbɛka nea ɛbɛma woahu nyansa akyerɛ wo,Efisɛ nyansa ho nneɛma dɔɔso. Ɛhɔ na wubehu sɛ Onyankopɔn abu n’ani agu wo mfomso no bi so. 7 Wubetumi ahu Onyankopɔn nneɛma a emu dɔ no anaa?Anaa wubetumi ahu ade nyinaa so Tumfo no ho biribiara?* 8 Ɛkorɔn sen ɔsoro. Ɛdɛn na wubetumi ayɛ? Emu dɔ sen Ɔdamoa.* Ɛdɛn na wubetumi ahu? 9 Ɛware sen asaase,Na ɛtrɛw sen ɛpo. 10 Sɛ ɔretwam na ɔkyere obi, na ɔde no kɔ asɛnnibea a,Hena na obetumi asiw no kwan? 11 Efisɛ sɛ mmarima redaadaa nkurɔfo a, ohu. Sɛ ohu adebɔne a, ɔrenhu anaa? 12 Ɛda a sare so afurum bɛwo onipa no,*Saa da no na obi a ne ti awu benya ntease. 13 Wo de, yɛ wo koma yiyeNa trɛw wo nsam kyerɛ no; 14 Sɛ woreyɛ bɔne a, gyae,*Na mma amumɔyɛ biara nntena wo ntamadan mu. 15 Ɛba saa a, wubetumi ama w’ani so a woremfɛre;Na wubegyina pintinn a worensuro. 16 Ɛbɛma wo werɛ afi wo haw;Wobɛkae no sɛ nsu a abɛsen kɔ. 17 Wo nkwa bɛhyerɛn asen sɛnea owia hyerɛn awia ketee;Na ne sum mpo bɛyɛ sɛ adekyee. 18 Wubenya awerɛhyem efisɛ anidaso wɔ hɔ.Wobɛhwɛ wo ho nneɛma ahyia, na wobɛda dwoodwoo. 19 Wobɛda, na obiara renhunahuna wo.Na nnipa bebree bɛba wo nkyɛn sɛ yɛ wɔn adom. 20 Abɔnefo de, wɔn ani renhu ade yiye.Wɔrennya baabiara nguan nkɔ,Na owu* nko ara na ɛbɛyɛ wɔn anidaso.”+
^ Anaa “obi a odwa n’anom na odi bem?”
^ Anaa “wubetumi ahu ade nyinaa so Tumfo no kɛseyɛ mu?”
^ Anaa “Sheol,” kyerɛ sɛ, adasamma damoa. Hwɛ Nkyerɛkyerɛmu afã hɔ.
^ Anaa “Ɛda a wɔbɛwo wuram afurum sɛ onipa no.”
^ Anaa “Sɛ wo nsa reyɛ bɔne a, yi fi wo ho kɔ akyirikyiri.”
^ Anaa “ɔkra a ɛrewu.”